RIPPERS / THUMBS / RAKES Vagadziri uye vanotengesa - China RIPPERS / THUMBS / RAKES Factory
Bonovo Batanidza-paHydraulic Thumb yakagadziridzwa kune chimiro chemabhakiti ako uye yakagadzirwa nesimbi-yakasimba simbi. Pane mhando yemamodeli aripo. Kutenderera 145 kusvika ku180.
Bonovo Mechanical Thumb inopa nzira inoshanda uye inokwanisika yekubata matombo, bhurasho, zvimiti zvemiti, mapaipi uye zvimwe zvakaoma-kufambisa zvinhu. Tora uye isa zvinhu zvine yakazara kutonga. Ichi ndicho chishandiso chakakosha pakuputsa, kuchenesa ivhu uye zvese zviitiko zvekunhonga. Mechanical, hydraulic, weld-on uye bhaudhi-pane mhando zvese zviripo.
Bonovo Rake yakanakira kutsanya-kuchenesa-kusimudzira, kusimudzira zvinomera, kusefa ivhu / matombo uye kubvisa husingadiwe shrubbery nekuwandisa. Chinyorwa chinogona kusefa nekurongedzwa kubvisa marara asingadiwe uye kusiya ivhu rakanaka kana zvinhu kumashure. Zvese zviri zviviri zvinodzosera kumashure uye mberi nzira.
Bonovo Pin-on Hydraulic Thumb yakagadzirirwa kune chaiwo muchina. Inoshanda nemichina midiki pamwe nemichina mikuru. Yakabatanidzwa dhizaini padivi pamahwendefa neminwe yesimba rakakura, Yakakosha minwe serration yekuwedzera kugona kubata.